सेमील्ट विशेषज्ञले वेब एक्सटेक्शन उपकरण सूची साझेदारी गर्दछ
तपाईलाई वेबसाइट बनाउनु पर्छ वा तपाईंको आरएसएस फिडहरू ल्याउन आवश्यक छ सही, उपयोगी र प्रामाणिक डेटाको साथ, तपाईं स्क्रिन स्क्रैपिंग र डाटा निष्कर्षण कार्यक्रमहरूको दायरा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
यदि तपाईं नियमित आधारमा वेबसाइटबाट उत्पादन डेटा खिच्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले मर्जेन्डालाई रोज्नु पर्छ. र यदि तपाईंलाई विभिन्न यात्रा पोर्टलहरू, सोशल मिडिया साइटहरू र समाचार आउटलेटहरू स्क्रैप गर्न आवश्यक छ भने त्यसपछि युपिथ र किमोनो तपाईँका लागि उत्कृष्ट छन्।.
यी3उपकरणहरूको साथ, तपाईं फारम भरने परियोजनाहरू स्वचालित गर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटमा अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ.
किमोनो एक प्रसिद्ध वेब डेटा निष्कर्षण र स्क्रीन स्क्रैपिंग अनुप्रयोग हो - design your own house free online. यो आदर्श हो जुन उनीहरूको व्यवसायलाई प्रत्यक्ष डेटाको साथ बल गर्न चाहान्छ, र तपाईंलाई किमोनोबाट फाइदा लिनको लागि कुनै कोडिङ कुञ्जीको आवश्यकता पर्दैन।. यसले तपाईंको समय बचत गर्न सक्छ र तपाइँको वेबसाइटलाई स्न्याशिंग डाटाको साथमा जोगाउँछ. तपाईले भर्खरै यो डाउनलोड डाउनलोड र स्थापना गर्नु पर्छ, तपाईंको पृष्ठ तत्वहरू हाइलाइट गर्नुहोस् र केही उदाहरणहरू प्रदान गर्नुहोस् ताकि किमोनोले आफ्नो कार्यहरू राम्ररी प्रदर्शन गर्न सक्दछ. यो नि: शुल्क सुविधाहरूसँग नि: शुल्क कार्यक्रम हो र उद्यम र फ्रीलान्सरहरूको लागि उपयुक्त छ. किमोनो तपाईंको डेटा JSON र CSV ढाँचामा लेबल गर्दछ र तपाईंको वेब पृष्ठहरूको लागि API हरू सिर्जना गर्दछ, पछि यसको प्रयोग पछि यसको प्रयोगको डेटाबेसमा भण्डारण गरिरहेको छ।. यसले कुनै पृष्ठ नेभिगेशनको आवश्यकता पर्दछ र तपाईंको डेटा निष्कर्षण कार्यलाई गति दिन्छ.
मोजाडा एक नि: शुल्क डेस्कटप अनुप्रयोग र स्क्रीन स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो. यसले हामीलाई असीमित वेब पृष्ठबाट सबै डाटा स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ. यो सेवाले सबै वेब पेजहरूलाई सम्भावित डेटा स्रोतको रूपमा व्यवहार गर्नेछ, र तपाईंलाई मर्जेन्डाबाट लाभान्वित गर्न कुनै प्रोग्रामिङ कुञ्जीको आवश्यकता पर्दैन।. यो धेरै प्रोग्रामरहरु र एसईओ विशेषज्ञहरु द्वारा सिफारिस गरिएको छ. तपाईले भर्खरै आफ्नो वेब पेजहरू प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ र मोजेडाले यसको कार्यहरू गर्न दिन्छ. तपाईं सजिलै संग मोजेडाको API पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र सही जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्. यसले स्क्रिनशटहरूको माध्यमबाट स्क्रिन स्क्रैपिङ प्रक्रियामार्फत हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ र एक घण्टा भित्र सयौं वेब पृष्ठहरू प्रशोधन गर्न सक्छ. यो कार्यक्रम प्रयोग गर्न सजिलो छ र कुनै पनि टेक्निकल कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन. कहिलेकाहीँ, मोजाडाले 24 घण्टा सम्म डेटा स्क्रेप गर्न र वेब पृष्ठ पृष्ठहरू प्रशोधन गर्न सक्छ, र यो यो उपकरणको मात्र खण्ड हो।.
यूपीथ प्रयोगकर्ताहरु को लागि विभिन्न वेबसाइटहरु र प्रोसेसिंग धेरै वेबसाइटहरु मा माहिर हुन्छन्. यो सबैभन्दा विश्वसनीय र उत्कृष्ट स्क्रिन स्क्रैपिंग र डेटा निष्कर्षण प्रोग्राम हो. यो कोडर र वेब विकासकर्ता दुवैको लागि एकदम सही छ र पृष्ठ नेभिगेसन जस्तै सबै डेटा निष्कर्षण चुनौतिहरूलाई सजिलै पार गर्न सक्नुहुन्छ. यो न केवल तपाईंको वेब पेजहरु लाई पनि पीडीएफ फाइलहरु लाई पनि अलग गर्दछ. तपाईले यो वेब स्क्रैपिंग विजार्ड खोल्न आवश्यक छ र तपाइँलाई स्क्रैप गर्न आवश्यक जानकारीलाई हाइलाइट गर्दछ. उतथले हजारौं वेब पृष्ठहरू एक घण्टा भित्र स्क्रैप गर्नेछन्, तपाइँलाई सम्बन्धित स्तम्भहरूमा सही र अद्यावधिक गरिएको डाटा प्रदान गर्नेछ.